လိုရာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီမို့ စုပေါင်းညီညာကြပါစို့ – BurmeseHearts
ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကတည်းက ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ဒီရက် …. အစိုးရသစ်သို့ တရားဝင်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်ရက် …. အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ အိနြေ္ဒသိက္ခာရှိစွာ တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့ရက် … အမုန်းတွေအစား အပြုံးတွေဖလှယ်တဲ့ရက် … ပြည်သူပြည်သားတွေ တရားဝင် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်နိုင်တဲ့ရက် … စောင့်မျှော်ခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်ခဲ့တဲ့ အရပ်သားအစိုးရစစ်စစ် တရားဝင် အာဏာရတဲ့ရက် … ပြောလို့ဆုံးနိုင်ဦးတော့လား အပျော်တွေလေ။
တခြားသူလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ ကိုယ်တမြတ်တနိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကလေး စုတ်ပြတ်သတ်နေဦးတော့ ကိုယ့်လက်ထဲပြန်ရောက်တာကိုပဲ ကျေနပ်ရမယ့်အခြေအနေပါ။ အားလုံးကောင်းဖို့ အကောင်းဘက်ကတွေးကြစို့ …. ဘယ်သူတွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ နောက်ကြောင်းပြန်အပုပ်ချပြီး အချိန်ကုန်မနေဘဲ လုပ်သင့်တာတွေကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်လို့ (၅)နှစ်ဆိုတဲ့ လုပ်ခွင့်ရကာလကလေးမှာ (ကိုယ်ချစ်သော အရပ်သားအစိုးရတက်တုန်းမှာ) အစိုးရက ပြည်သာဖို့ကြိုးစားနေစဉ် ကိုယ်တွေကလည်း ကိုယ့်အစွမ်းအစတွေတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ၊ ကိုယ့်ပညာကတဆင့် ဝင်ငွေတွေ တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ၊ ကိုယ့်မိသားစု ပညာရေးနဲ့ ဘဝရေးကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ဖို့ ၊ နိမ့်ကျဘဝတွေကို ဖေးမတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ဖို့ စတာစတာတွေကို အစိုးရနဲ့ပြည်သူ လက်တွဲညီညီချီတက်ရဦးမှာမို့ သူများမကောင်းကြောင်းလိုက်ပြောရုံနဲ့ ကိုယ်ကောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ကောင်းမွန်သောအနာဂါတ်ကိုချီတက်ဖို့ ကိုယ်တိုင်က ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြစို့ပါ။
အရင်အစိုးရဆိုတာက ဝတ်စုံပြောင်းဝတ်တဲ့အစိုးရလို့ပြောပြော ၊ အရေခွံလဲတဲ့အစိုးရလို့ပြောပြော ရာထူးကြီးသူ (သူတို့) အချင်းချင်းထဲကမှ အသင့်တော်ဆုံးလူကို သမ္မတရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီး အစိုးရဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယခင်သမ္မတဟောင်းကြီး ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ။ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားသည်အထိ ကောင်းကောင်း ထိန်းကွပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ပါ။ ဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ပြည်သူတွေအစား ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ဒီကနေတဆင့်ပြောပါရစေ။
သူတို့အချင်းချင်းထဲက အတင်းကာရော မစဉ်းစားမဆင်ခြင် ချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတွေထဲကမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ လူထုဆန္ဒရှေ့ထားပြီး မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်ထားခဲ့တယ်။ ကြေးနီစီမံကိန်းမှာတော့ လက်လျော့ထားခဲ့တယ်။ ဒီအစိုးရမတိုင်မီချုပ်ကိုင်ထားခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းတွေ ပွင့်လာခဲ့ပြီး မြို့နေလူတန်းစားအများစု ဖုန်းကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်စွာစီတန်းဟောပြောခွင့် မယ်မယ်ရရ မရခဲ့ပေမယ့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်း အထိုက်အလျောက်ပွင့်လာခဲ့တယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို တတိုင်းတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်အခမ်းအနားကိုလည်း ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ် စတဲ့ ဒီလိုကောင်းကွက်တွေကိုပဲ ယူကြည့်မယ်ဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေထဲကမှ လုပ်နိုင်သလောက်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ တွေးပေးကြပါစို့။
လုပ်နိုင်သလောက်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရတာဟာ သမ္မတတစ်ဦးအလျောက် လုပ်သင့်သလောက်မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ယူဆရင်လည်းရပါတယ်။ ဒီလိုမယူဆခင် သူဟာလည်း စစ်ဘက်က အရပ်ဘက်ပြောင်းပြီး သမ္မတလုပ်လာခဲ့သူတစ်ယောက်လို့ လက်ခံရုံပါ။ သူကျွမ်းကျင်တဲ့အရာဟာ စစ်ရေးဖြစ်နေတာမို့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့နိုင်ငံရေးမှာ နိုင်ငံရေးပညာသီးသန့်လိုက်စားထားတဲ့ဂုရုတွေလောက် သူ မလုပ်နိုင်ခဲ့တာကို အခုအချိန်မှာ (အရပ်သားအစိုးရစစ်စစ်ရနေချိန်) နားလည်ပေးလိုက်ကြပါစို့။ ကျွန်မကတော့ သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကို ကြံဖန်ချီးကျူးပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ငါးနှစ်က သူ့ထက်သဘောထားတင်းမာသူသာ သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ယနေ့မှာ ကျွန်မတို့ဟာ ဒီလိုအရပ်သားအစိုးရစစ်စစ် ရဖို့အခွင့်အရေး ရှိနေနိုင်ပါရဲ့လားလို့တွေးပြီး သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကို ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်တာပါ။
ကျွန်မဟာ တခါတလေ ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ မပြည့်မီနေတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေရာတခု ထိုင်ရတဲ့အခါမှာ ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲ ကိုယ့်ထက် အလုပ်အပေါ် စေတနာထားလုပ်နိုင်သူ မရှိဘူးလို့ သိမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်နဲ့မထိုက်တဲ့နေရာကို တာဝန်အရဝင်ထိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့မထိုက်တဲ့နေရာနေရတော့ စိတ်တော့မသန့်ဘူးပေါ့။ တကယ်ထိုက်တန်တဲ့သူပေါ်လာရင် ကိုယ်တိုင်က Request လုပ်ပြီး နေရာကနှုတ်ထွက်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ နေရာကအရေးမကြီးပါဘူး။ လုပ်ငန်းတခု အောင်မြင်စွာ တင့်တင့်တယ်တယ် ပြီးမြောက်သွားဖို့က အရေးကြီးတာမဟုတ်လား။ ကိုယ့်ထက် ပိုလုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိတဲ့သူ ၊ တကယ်လည်း စေတနာထားလုပ်မယ့်သူရှိနေရင် ဘာကြောင့် ကိုယ့်နေရာ အလိုက်သိသိ မဖယ်ပေးနိုင်ရမှာလဲနော်။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်ဘဲ လုပ်နိုင်သယောင်နဲ့ ဝင်ထိုင်နေတာကမှ အလုပ်လည်းမပြီးမြောက် ၊ ကိုယ့်အုပ်ချုပ်မှုအောက်က အဖွဲ့အစည်းလည်းနုံချာ ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မလုံနိုင်ဘဲ အဲဒါကမှ တကယ့်ရှက်စရာနော်။
အခုအစိုးရသစ်တက်လာပြီ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပါတီကလူတွေ နေရာရလာပြီ။ လူထုစိတ်တိုင်းကျဖြစ်ပြီဆိုတော့ လူထုကိုသူတို့ဘာပေးဆပ်မလဲဆိုတာ မမျှော်လင့်ခင် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို ကိုယ်တိုင်စလုပ်ကြရအောင်လား …. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းစေချင်ရင် ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းအောင် အရင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်။ ဆေးလိပ်တိုနဲ့အမှိုက်တွေ ၊ ကွမ်းတံတွေးတွေ လက်လွတ်စပယ် စွန့်ပစ်တာတွေကို သတိထားပြီးနေရာတကျ ၊ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မယ်။ စုပေါင်းညီညာစွမ်းအားနဲ့ စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်သူတွေကို အများအားနဲ့တားဆီးမယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တပတ်တခါဖြစ်ဖြစ် စုပေါင်းရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင် ရှုပ်ပွညစ်ပေနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ လုပ်တာလေးတွေ အရှိန်ရလာတာနဲ့အမျှ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်လာမှာပါ။
အစိုးရက တို့အခွင့်အလမ်းအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတာ မမျှော်ခင် ကိုယ့်အခွင့်အလမ်းကို ကိုယ်တိုင်လမ်းဖောက်ကြရအောင်လား …. ကိုယ့်တကိုယ်ရည်စာ ၊ ကိုယ့်မိသားစုစာ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပျော်ရွှင်ရေးတွေအတွက် အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချမယ်ဆိုရင် အချိန်နဲ့အမျှ အကျိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန် ကိုယ့်ကိုကူညီတဲ့သူရှိစေချင်ရင် တပါးသူဒုက္ခရောက်နေစဉ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကစ နိုင်သမျှလေး ကူကြရအောင်လား။ ယခုလည်း စိတ်ကျေနပ်ချမ်းသာ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆို နောင်သံသရာလည်းကောင်းတာပေါ့။ ဘာသာတိုင်းမှာ တပါးသူအား ကူညီဖေးမခြင်း ၊ ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာ ကောင်းမွန်သောလုပ်ရပ်အဖြစ် အစဉ်ရှိနေတာပါ။
ကိုယ်တွေ့ကြုံဆက်ဆံရတဲ့နေရာတိုင်းမှာ စေတနာထားပြီး စနစ်တကျလုပ်ကိုင်တာမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်ဆို ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲရောက်လာတဲ့အခါ စေတနာထားပြီး အလုပ်မြန်ဆန်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ကိုင်ပေးရမှာပါ။ တစ်ဦးချင်စီက ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် စေတနာသဒ္ဒါတရားထက်သန်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ခပ်မြန်မြန်လေး အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မှာပေ့ါ။ ကမ္ဘာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ်လို့မပြောတာဟာ ကျွန်မတို့ဟာ နှစ်ငါးဆယ်ကျော် နောက်ကောက်ကျခဲ့ပြီမို့ အနီးဆုံးအာရှနိုင်ငံတွေကို မှီအောင်လိုက်နိုင်ဖို့ စနစ်ရယ် ၊ လူအားရယ်ပေါင်းပြီး အချိန်နဲ့အမျှ အားသွန်ခွန်စိုက် စုပေါင်းညီညာစွာ လုပ်ကိုင်ကြရမှာပါ။
နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ပြည်သူ အစေးမကပ်လို့သာ အစိုးရအဆက်ဆက်ကို ကလန့်တိုက်နေခဲ့ကြတာမဟုတ်လား။ အားများတဲ့ပြည်သူတွေ တစ်ဦးချင်စီက စတင်ပြောင်းလဲပြီး နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်သိမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ လက်တကမ်းအလိုမှာပါ။ ပြည်သူတွေညီတာကို အရပ်သားအစိုးရစစ်စစ် အာဏာရဖို့ မဲပေးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီပဲ။ ဒီတခါလည်း နိုင်ငံတော်ကြီး စနစ်ကျကျ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ နိုင်ငံသားတိုင်းက အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမယ် ၊ အဖျက်စိတ်ရှိသူတွေကို တာဝန်သိသိနဲ့ဖော်ထုတ် အပြစ်ပေးမယ် ၊ ကိုယ်တိုင်က စတင်ပြောင်းလဲပြီး ခြမစားတဲ့ စနစ်ကျကျ အစိုးရယန္တရားကို ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ ၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီက စတင်အကောင်အထည်ဖော်လိုက်မယ်ဆို ခပ်မြန်မြန်လေး ခရီးရောက်မှာပါ။
အဆုံးမှာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ရွတ်တယ်လို့ဆိုဆို အချီးကျူးထိုက်ဆုံးသူကို ချီးကျူးရမှာပါပဲ။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ်ကျိုးကိုစွန့်လွှတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ နှစ်သုံးဆယ်နီးပါး မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးကျူးပါရစေ။ သူမဟာ ပန်းပျိုးလက်သက်သက်ပါ။ ကိုယ်ပျိုးတဲ့ပန်း ကိုယ်မပန်ရလည်းနေပါစေ ၊ ကိုယ်စိုက်တဲ့အသီး ကိုယ်မစားရလည်းနေပါစေ ၊ ကိုယ်ပျိုးတဲ့အပင်ရိပ် ကိုယ်မခိုရလည်းနေပါစေ အများအကျိုးရှိမယ်ဆို ကိုယ့်အသက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးတွေကိုလည်း စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ အံ့ဖွယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပါ။ ဒါတွေဟာလည်း သူမဖခင်ရဲ့သွေးတွေ သူမကိုယ်ထဲစီးဆင်းနေရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲ သူမရဲ့ပင်ကိုယ်ဗီဇစရိုက် ၊ သူမ လေ့လာခဲ့သော ပညာဗဟုသုတနဲ့ သူမ ကျင့်ကြံနေသော တရားဘာဝနာတို့က သူမအား လမ်းကြောင်းမှန်ကို မတွေမဝေ ၊ တစိုက်မတ်မတ် လျှောက်လှမ်းစေတာပဲဖြစ်မှာပါ။
သူမဟာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ အတုယူရအောင် ငါတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ သူမစိတ်ထားနဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုက ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ အတုယူဖို့ဖြစ်နေတာ မြန်မာပြည်သူ ၊ ပြည်သားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ငါဆောက်ခဲ့တဲ့ဇတ်စင်ပေါ်မှာ မင်းသမီးအဖြစ် ငါမကရရင်လည်းနေပါစေ ၊ ဇတ်ပို့နေရာက လိုရင်လည်းကမှာပဲ ၊ ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပွဲခင်းထဲဆင်း လက်ခုပ်တီးရရ ၊ ဘယ်ထောင့်ဘယ်နေရာမှာပဲ နေရပါစေ မြန်မာပြည်သူ ၊ ပြည်သားတွေ အေးချမ်းရင်တော်ပါပြီဆိုတဲ့ သူမစိတ်ဓါတ်လေးကိုက ချစ်စရာကောင်းနေတာ ၊ အတုယူစရာကောင်းနေတာပါ။ ဒီစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲ မြန်မာပြည်သူ ၊ ပြည်သားတွေသာမက ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အာရုံတွေ ၊ ထောက်ခံမှုတွေကို သိမ်းကျုံးရယူထားတာပါ။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုး ရရှိထားတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူ ၊ ပြည်သားတွေအတွက် စေတနာထားနိုင်လွန်းတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခေတ်ကိုမီတုန်း ၊ သူမ ဦးဆောင်သော ပါတီက အစိုးရနေရာရတုန်း ၊ သူမ ပါတီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတုန်း လုပ်ကိုင်နေတုန်းမှာ ဒီခေါင်းဆောင်အတွက် ၊ ဒီနိုင်ငံအတွက် ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ ၊ ပြည်သားတွေ ၊ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ကျရာနေရာက ထမ်းနိုင်တာ ဝင်ထမ်းပြီး သမိုင်းအသစ်မှာ ပါဝင်ကြရအောင်လား။ ပြိုင်တူတွန်းလို့ ဒီမိုကရေစီခရီးဆီ ရွေ့ခဲ့ပြီမို့ တစ်ဦးချင်းစီက တာဝန်သိစွာ ညီညီညာညာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆို အချိန်တိုအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်မောင်းခတ်နိုင်ပြီပေါ့။
E27.co is partnering with BurmeseHearts.com to invite the Burmese Tech Startup Community to ECHELON Asia Summit 2016 from JUNE 15 – 16 | SINGAPORE
BurmeseHearts	 Oct 27, 2015 0
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်နဲ့ (၇)ပတ်အတွင်းက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ…